ပႈပါ Francis ဆွ႕လီၚ၀ဲတႈမၚစ႕ၚ ဆူကီႈ Albania ပွၚတူဥဘဥတႈလ႕ ဟီဥခိဥဟူး၀ဲအဃိတႈကစီႈ | Radio Veritas Asia
Pope sends aid to Albania earthquake victims. Photo: Vatican News Nov 28 2019
ကီႈ Albania အကလံၚစိးပီႈလဲဥထံက႕ႈနံၚ အတႈလီႈတႈက်ဲ ဘဥတူဥဘဥ၀ဲဟီဥခိဥဟူးလ႕အဂံႈဆူဥ၀ဲ (6.4 Magnitude)ဖဲ ၂၀၁၉ နိ၀့ဘ႕ဥ ၂၅ သီအမုႈနၚခီအကတီႈနဥ့လီၚ’ တႈသံစူဥသံစိး ဒီးတႈဟးဂူဥဟးဂီၚသ့ဥတဖဥ အိဥထီဥ၀ဲဖဲ ပီႈလဲဥထံက႕ႈနံၚ ၀့ႈသ့ဥတဖဥအပူၚနဥ့လီၚ’
ကီႈ Albania အဂဏတဲႈဂီၚစံး၀ဲလ႕ အစွၚကတ႕ႈပွၚသံ၀ဲ ၄၇ ဂၚယ ဒီးပွၚအါဒံအါဂၚသ့ဥတဖဥ လီၚမဥဒ္၀ဲအကတီႈနဥ့လီၚ’ အစွၚကတ႕ႈပွၚ ၆၀၀ သ့ဥတဖဥ ဘဥဒိဘဥထံး၀ဲယ ပွၚအကဎၚဒီးအကဎၚသ့ဥတဖဥ တအိဥလ႕ၚ၀ဲဒီးအဟံဥအဃီသ့ဥတဖဥလ႕ၚဘဥနဥ့လီၚ’
ပႈပါ Francis ဆွ႕လီၚ၀ဲစ့မၚစ႕ၚတႈ Euro တကလီႈယ ဒီးကဘဥတႈသူဥအီၚ လ႕တႈမၚကိညဥလီၚက့ၚတႈ အဆိကတ႕ႈအပတီႈနဥ့လီၚ’ ဘဥတႈဟ့ဥနီၚလီၚအီၚဆူ တလးပ႕အတႈပ႕ လ႕အတူဥဘဥတႈလ႕ဟီဥခိဥဟူး၀ဲအဃိယ လ႕တႈမၚကိညဥလီၚက့ၚတႈလ႕အခ့် ဒီးတႈကြႈထြဲမၚစ႕ၚတႈသ့ဥတဖဥအဂီႈနဥ့လီၚ’
ဖဲ ၂၀၁၉ နိ၀့ဘ႕ဥ ၂၇ သီယ မုႈပ်ဲၚနံၚအပူၚယ ပႈပါ Francis ဃ့ထုကဖဥ၀ဲလ႕ ပွၚလ႕အတူဥဘဥတႈလ႕ ဟီဥခိဥဟူး၀ဲအဃိသ့ဥတဖဥအဂီႈ ဖဲအထံဥလိဏအသးဒီး ပွၚကမ်႕ဥဖိသ့ဥတဖဥ ဒ္အညီႏုႈ၀ဲအသိး အကတီႈနဥ့လီၚ’ ကီႈ Albania မ့ႈအဆိကတီႈထံကီႈတဘ့ဥ လ႕ပႈပါ Francis ဃုထ႕ထီဥ၀ဲ ဒ္သိးအကလဲၚဟး၀ဲအဂီႈအဂ့ႈ ဒီးစံး၀ဲလ႕ အပဏဘူးအသးဒီးပွၚတူဥဘဥတႈသ့ဥတဖဥယ ဒီးဃ့ထုကဖဥနဥ့တႈလ႕ ပွၚလ႕အသံတ့ႈလံ၀ဲသ့ဥတဖဥအဂီႈယ ဒီးပွၚလ႕အဘဥဒိဘဥထံး၀ဲသ့ဥတဖဥအဂီႈ ဒီးပွၚသ့ဥတဖဥအံၚအဒူဥဖိထ႕ဖိသ့ဥတဖဥအဂီႈအဂ့ႈ စံး၀ဲနဥ့လီၚ’
Source: Vatican News. 28 November 2019